गाँजर खाने महिलाको स्तन क्यान्सरको सम्भावना ६० प्रतिशतले कम हुन्छ – Idea Khabar
आइडिया खबर२०७८ जेष्ठ २, आईतवार २२:५४
एक अध्यननले गाजर खाने महिलाहरुमा भविस्यमा हुनसक्ने स्तन क्यान्सरको सम्भावना ६० प्रतिशतले कम हुने देखाएको छ । बैज्ञानिकहरुका अनुसार प्राकृतिक रुपमा गाजरमा पाइने रसायननै यो सम्भावना देखिएको हो ।
हुन त बैज्ञानिकरुले गाजर खानामा समावेश गर्दा मटुरोग तथा क्यान्सरबाट बच्न सकिने बर्षौ अघि नै पुष्टि गरिसकेका छन् । तर स्तन क्यान्सरका लागि यसको प्रयोग यति धेरै प्रभावकारी छ भनिएको थिएन ।
अमेरिकन जर्नल अफ क्लिनिकल न्यूट्रेसनमा भर्खरै प्रकाशित यो एउटा रिपोर्टले स्तन क्यान्सरका लागि गाजरको प्रयोग अत्यन्त प्रभावकारी देखिएको उल्लेख छ । सो अध्ययन अनुसार गाजरमा पाइने विटा क्यारोटिनले स्तन क्यान्सर हुने सम्भावना ४० देखी ६० प्रतिशत कम हुने देखाएको छ ।
बेलायतमा गरिएको सो अध्इयनमा १ हजार ५ सय स्तन क्यान्सर पिडीत महिला र त्यत्तिनै संख्यामा स्वस्थ महिला समावेस गरिएको थियो । सहभागिहरुमा बैज्ञानिकहरुले दैनिक रुपमा खाने खानाको सोध साथै रगतमा विटा–क्यारेटिनको मात्रा मापन गरेका थिए । जसबाट पत्ता लाग्यो कि जसले खानामा विटा क्यारोटिन पाइने पदार्थ जस्तै गाजर समावेश गरेका थिए तिनीहरुमा स्तन क्यान्सर हुने सम्भावना ४० देखि ६० प्रतिशत कम देखियो । तर एस्ट्रोजेन रिसेप्टर पोजेटिभ स्तन क्यान्सरलाई भने गाजरमा पाइने विटा क्यारोटिनले नघटाउने पाइएको उनीहरुले बताए ।
यो बाहेक गाजरमा पाइने विटा क्यारोटिनलाई शरीरले भिटमिन ए मा परिवर्तितगरि आँखा तेजिलो बनाउन तथा रोग प्रतिरक्षा क्षमता बढाउन मद्दत गर्छ । विटा– क्यारोटिनले गाजरमा चहकिलो रंग भर्ने तत्व हो ।
बेलायतमा मात्रै वर्षेनी ५८ हजार महिलामा स्तन क्यान्सर भेटिन्छ । एजेन्सीबाट साभार
यौन सम्पर्कबाटै ठिक हुन्छ यि रोगहरु ! हेर्नुहोस्
२०७६ आश्विन ५, आईतवार १६:०५
सुन्दर हुने रहर छ ? सधैं लसुनको प्रयोग गर्नुहोस् ।
२०७६ आश्विन १०, शुक्रबार ०३:३०
२०७८ जेष्ठ ९, आईतवार २३:३३
बिहेअघि यौनसम्पर्क गरेको थाहा हुन्छ कि हुँदैन ? वास्तविकता जानी राखौ !
२०७६ आश्विन १७, शुक्रबार १९:३६
२०७६ आश्विन ४, शनिबार ०२:४५